आठराई, तेह्रथुम, तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका–४ इवामा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गमा शुक्रबार राति श्रीमान्द्वारा श्रीमतीको हत्या भएको छ ।
शव परीक्षणका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संक्रान्तिबजारमा राखिएको छ । ओलीको परिवार गत कात्तिकदेखि केजी निर्माण कन्सल्टेन्सीद्वारा निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत आठराई सडकखण्डमा मजदूरीका आएका थिए । -रासस
प्रकाशित : शनिबार, फागुन २६, २०७४१९:२२
उत्तर कोरियासँगको वार्ता बारे क्लिन्टनको धारणा सावजनिक
बैंकले कर्जा दिन अटेर गर्दा स्वरोजगार योजना अलपत्र
बीमा गराउने भन्दा माग दाबी बढी !
नापी नक्शामा छैन पासाङल्हामु सडकको रेखाङ्कन
रोल्पाली युवाः जसले जहाज उडाउँछन् !
३३ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका